Iindaba ezivela kwi-WordPress 3.3 Sonny - Geofumed
Iindaba ezivela kwi-Wordpress 3.3 Sonny
iindaba WordPress 3.3 Mfana
NgoDisemba, 2011 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Inguqulelo entsha ye-WordPress efikile nje xa unyaka we-2011 iphelile, izisa iindaba, zingabikho kodwa zibalulekile:
Kwimihlaba apho kukho utshintsho, ibhaluni yelumkiso iphakanyiswa okokuqala xa isetyenziswe, kubonisa utshintsho.
Emva koko, iphaneli ekhohlo ngoku endaweni yokuthunyelwa kwidokodo ibonisa imisebenzi eyenziwe emva kokudlula imouse. Kuhle kakhulu, kuba njengokuba iifowuni zifakiwe zenze le paneli ingakwazi ukulawulwa, nangona kusekho isidingo sokongeza izaziso kwinqanaba lepaneli eliphambili, ukuba uqaphele into ekuhlaziywa ngayo.
I-bar yangaphezulu yafumana utshintsho oluthile, nangona kunjalo ngaphezulu kwinqanaba lezobugcisa.
Kwakulindelwe, ngoku kungeniswa kwe-Tumblr idibeneyo.
Ngokuphathelele ukwakhiwa kweziphumo, i-interface yeAjax ngoku ikuvumela ukuba udonse kwaye ulahle iifayile, into engcono ngokutshintsha. Ingaba imifanekiso, iifayile, okanye iividiyo, ibha yomgangatho yenkalo yokulayisha iboniswa.
Ukusebenza kwiphepha le-iPad sele liphuculwe ngakumbi kwi-navigation ngokusebenzisa umbhalo ngokubhaliweyo.
Umyalezo ngoku ubonakala ucebisa ukuba omnye umsebenzisi uhlela ukungena, okufuneka ukuba kube ngophuculo ngokupapashwa kobambiswano, nangona kungumlumkiso wembali kuphela okhusela ukudala iinguqu ezihlukeneyo kunye nokulahlekelwa kwexesha.
Kwinqanaba leenkcukacha kukho iinguqulelo, ezingabalulekanga kubasebenzisi kodwa kubaphuhlisi. Ewe ubona ukuba ezinye izinto ezilahlayo zavela, kuba nangona zihlambulule isiseko kunye ne-Wp Clean Fix plugin, kwakukho iinguqu ezifihliweyo zokungena eziphumayo zingcolileyo.
Ngaphandle koko, ukuhlaziywa kuhlambulukile, ngaphandle kwemingcele emininzi. Ngokuqinisekileyo, ngaphandle kufakwa kwayo efuna iqondo elilodwa, emva kwemizuzu ye5 I-WordPress imele imifanekiso efanelekileyo kakhulu yeModeli eVulayo.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Sevilla kwi-3D, phakathi kwezinto ezintsha zeGoogle Maps
Post Next Indlela yokufaka imifanekiso yendawo kwiGoogle EarthOkulandelayo "